Utility Assistance - Nepali (NE) - Washington State Department of Commerce
Home|Utility Assistance|Utility Assistance – Nepali (NE)
आफ्ना उपयोगिता बिलहरू भुक्तान गर्न मद्दत आवश्यक छ?
तपाईं कोभिड-19 महामारीको बेला आफ्ना विद्युत, प्राकृतिक ग्यास वा पानीका बिलहरू भुक्तान गर्न सक्नुभएको छैन भने, मद्दत उपलब्ध छ।
तपाईंको उपयोगिता कम्पनीलाई कल गर्नुहोस्। यी दुई प्रश्नहरू सोध्नुहोस्:
तपाईं के-कस्ता सहायता कार्यक्रमहरूमा योग्य हुनुहुन्छ?
के तपाईं आफ्नो विगतको बक्यौता रकमको लागि भुक्तानी योजना सेट गर्न सक्नुहुन्छ?
आफ्नो विद्युत, प्राकृतिक ग्यास वा पानीको उपयोगितामा सम्पर्क गर्न मद्दत आवश्यक छ? यो पृष्ठमा गएर नक्सामा आफ्नो ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्: https://www.commerce.wa.gov/utility-assistance/।
तपाईं मानिसहरूलाई उपयोगिता बिलहरू भुक्तान गर्न मद्दत गर्ने एक संघीय कार्यक्रमको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको आम्दानीको आधारमा, तपाईं “LIHEAP” (न्यून-आय गृह ऊर्जा सहायता कार्यक्रम) भनिने एक संघीय कार्यक्रमको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। पानीको बिलको लागि एक नयाँ, समान कार्यक्रमको विकास भइरहेको छ। यी योग्य आय स्तरहरूका केही उदाहरणहरू हुन्:
परिवारको आकार 1 व्यक्ति= आय प्रति महिना $1,595 वा प्रति वर्ष $19,140 भन्दा कम
परिवारको आकार2जना मानिस = आय प्रति महिना $2,155 वा प्रति वर्ष $26,860 भन्दा कम
परिवारको आकार4जना मानिस = आय प्रति महिना $3,275 वा प्रति वर्ष $39,300 भन्दा कम
थप जानकारीको लागि, 2-1-1 मा वा तपाईं बस्नुहुने स्थानीय “सामुदायिक कार्य निकाय” मा कल गर्नुहोस्। सम्पर्क जानकारी फेला पार्न यो नक्साको प्रयोग गर्नुहोस्: https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/Map.aspx
अन्य लागतहरूमा मद्दत गर्नका लागि संसाधनहरू उपलब्ध छन्। जानकारीको लागि 2-1-1 मा कल गर्नुहोस्।
महामारीले गर्दा वासिङ्गटनमा बस्ने धेरै मानिसहरूको अनपेक्षित बिल आएको छ। तपाईं एक्लै हुनुहुन्न। तपाईंलाई भाडा, खाना, ब्रोडब्याण्ड र थप कुराहरू भुक्तान गर्न मद्दत गर्ने कार्यक्रमहरूमा जडान गराउन सक्ने कोही व्यक्तिसँग कुरा गर्न 2-1-1 मा कल गर्नुहोस्।